Xukuumadda Somaliland Oo Xabsiga U Taxaabtay Odey Cumar-TAREYDH. | Maalmahanews
Xukuumadda Somaliland Oo Xabsiga U Taxaabtay Odey Cumar-TAREYDH.
March 31, 2016 - Written by admin
Hargeysa(Maalmaha news):- Odey Cumar Daahir (Cumar-TAREYDH) oo ka mida odayaasha reer Somaliland ee caanka ah isla markaana sida aadka ah loo yaqaano ayaa habeenkii xalay ahaa xabsiga loo taxaabay, kadib markii Ciidamada Boolisku kaxeeyeen.
Inkastoo aan si dhab ah loo ogayn sababta runta ah ee loo taxaabay hadana Cumar-TAREYDH ayaa la filayay in maalinta beri oo Khamiis ah loo Caleemo saaro Suldaanka Bahdeelo-CIIDAGALE, isla markaana waxa la sheegayaa in amarka lagu soo xidhay uu soo bixiyay Wasiirka Arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Warancade,iyada oo xadhigiisa la la xidhiidhinayo Caleemo-saarka Suldaanimo.
Ma Jiro war rasmiya oo ka soo baxay Xukuumadda Somaliland oo la xidhiidha Xadhiga Oday Cumar-TAREYDH iyo sababta loo xidhay.
Sidaa waxa Caawa Shabada Wararka ee Hayaannews u xaqiijiyay dad ay qaraabo yihiin Cumar Tareydh, balse warkaasi wax ka faah-faahsan xog nagamay siinin. Mar aanu la xidhiidhnay Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Cali Maxamed Warancade si aanu wax uga weydiino Sababta uu u soo xidhay Cumar-TAREYDH.
Cumar-Tareydh ayaa waxa uu hore u ahaa guddoomiyayaasha degmooyinka Maxamuud Haybe Iyo Maxamed Mooge ee Caasimada Hargeysa.